Maitiro ekugovana internet uye kushandisa Instant Hotspot muIOS 9 | IPhone nhau
Hatimbozive kuti ndepapi patichazoda kuve necontinu yekubatanidza pane chishandiso chisina 3-4G. Ndicho chimwe chezvikonzero nei zvakakosha kuve nekwanisi yekugovana internet. IOS 8 yakauya nezvakawanda zvitsva uye, pamwe chete neOS X Yosemite, Apple ecosystem yakawana mabasa akadai saHandoff anotibvumidza kutanga chiitiko nechero chishandiso uye nekuenderera nacho neimwe. Uye kwete izvo chete, zvakare isu tine mukana wekubatanidza kune yedu iPhone kubva kune yedu iPad kana iPod pasina kukosha kwekuisa password.
Pamberi peIOS 8, patakada kugovana internet taifanira kutora iyo iPhone, kumisa sarudzo yekugovana internet, kutora iyo iPad / iPod, tsvaga yedu iPhone muchikamu cheWiFi, sarudza network yedu uye nyora password. Nekuuya kweHandoff, izvi zvese zvakapfupisa, izvo zvinounza kunyaradzwa kwakawanda, asi pane chimwe chinhu chatinofanira kufunga nezvacho.
1 Maitiro ekugovana internet muIOS 8 kana gare gare
1.1 Kana opareta wedu ari OMR
1.2 Kana opareta wedu ari OMV
2 Maitiro ekubatanidza kune Instant Hotspot
Maitiro ekugovana internet muIOS 8 kana gare gare
Kugovera internet, chinhu chekutanga chatinofanira kuchengeta mupfungwa ndechekuti opareta wedu anofanira kutipa mukana wekugovana. Kana zvisiri, mutambo wapera.
Kana opareta wedu ari OMR
Kana opareta wedu ari Mobile Operator iyo iri yeNETWORK, isu tichangoita zvinotevera:
Takatamba pa Goverana internet.
Isu takagadzirisa switch.
Kubva kuPod yedu kana iPad tinotsvaga zita re iPhone yedu, tinosarudza network yedu uye tinoisa password yedu.
Kana opareta wedu ari OMV
Kana opareta wedu akanganisa zvigadzirwa kuvamwe vanoshanda, tichaita zvinotevera:
Tiri kuenda Nhare yedata network.
Isu tinodongorera pasi ku SHARE INTERNET / Access Point uye isu tinopinda kero yakapihwa neyedu opareta (Mune ino kesi, Pepephone's ndeye gprsmov.pepephone.com).
Kana kero yapinda, tichakwanisa kuona sarudzo yekugovana internet uye isu tichaenderera nhanho yechipiri yemaitiro evashandisi ve OMR.
ONA: Inofanirwa kutariswa kuti panogona kunge paine ma OMV anoita mune ino pfungwa se OMR uye zviri pamusoro hazvidiwe mune iyi nyaya isu taizongofanira kuita zvakafanana nezvakaitika kuma OMRs.
Maitiro ekubatanidza kune Instant Hotspot
Instant Hotspot, sekutaurwa kwezita, saka haufanire kuita chero chepamusoro; saka kuti zvese zviri pamusoro zvinoitika ipapo ipapo. Zvatichafanira kuita zviri nyore vane zvese zviri zviviri iPhone nePod / iPad neiyo imwechete Apple ID. Izvo zvishandiso zvinozozivana uye zvese zvatinofanirwa kuita ndeizvi enda kumaseji eWiFi ePod / iPad yedu uye sarudza network ye iPhone yedu. Sezvauri kuona mumufananidzo uyo musoro wechinyorwa ichi, Handoff inotibvumidzawo kuti tione kubatana kwekumhanya kwe iPhone yedu (2G, 3G kana LTE), kufukidzwa kwayo uye huwandu hwebhatiri. Mufananidzo wepadlock hauratidzike kana, zvichiratidza kuti ndewe network iyo isingade password.
Kana izvo zvaunoda kugovana internet kubva kune yako iPhone neIOS 8 kana gare gare nekombuta yako neOS X Yosemite kana gare gare, usazeze kuverenga chinyorwa chaIgnacio ku vinagreasesino.com Maitiro ekugovana iPhone internet kubatana neYosemite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana internet uye shandisa Instant Hotspot muIOS 8 kana gare gare
Chikamu chimwe chete, muIOS 8.4 haichisiri otomatiki. Asati 8.4 waenda kune iyo iPad, kune wifi, iyo iPhone yakaonekwa uye iwe ukaipa uye yakabatana Muna 8.4 vakaityora
Ndakatotaura kuti pane ipad yangu handina kuona iphone yangu.